“गाजर ले क्यान्सर रोगका साथै हिर्दयघात जस्ता रोग बाट बचाउछ।यस्तो छ्न अन्य १० फाइदा हेर्नू होस। सबै को जानकारि का लागि सेयर गरौ।। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“गाजर ले क्यान्सर रोगका साथै हिर्दयघात जस्ता रोग बाट बचाउछ।यस्तो छ्न अन्य १० फाइदा हेर्नू होस। सबै को जानकारि का लागि सेयर गरौ।।
“गाजर भान्सामा सधैँजसो प्रयोग भइरहने भएकाले यसबाट जो कोही पनि परिचित नै हुन्छन् । खानामा सलादको रुपमा, अचार बनाएर वा खाली चपाएर पनि हामीले गाजर खाइरहेका हुन्छौँ ।
“खासै महंगो नपर्ने, देख्दा पनि राम्रो र खाँदा पनि मीठो हुने भएकाले गाजर हाम्रो भान्साको अभिन्न अंग नै बनेको हुन्छ । हामीले गाजर त खाइरहेकै हुन्छौँ तर यसको फाइदाका बारेमा उतिसारो जानकारी नहुन सक्छ । गाजर कत्तिको हितकारी तरकारी हो त ? यसका फाइदा के के छन् ?
“आँखाको शक्ति बढाउँछ – गाजर आँखाको स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ । गाजरमा प्रसस्तै ‘बिटा क्यारोटिन’ नामक तत्व पाइन्छ जुसबाट भिटामिन ए बन्दछ । गाजरको नियमित सेवनले भिटामिन एको कमीले हुने रतन्धो लगायतका रोगको जोखिम कम हुन्छ र मान्छेको दृश्यक्षमता बढ्छ ।
“बुढ्यौली रोक्छ– यद्यपि बुढ्यौली सर्वव्यापी सत्य हो । तर नियमित रुपमा गाजर खानाले कम उमेरमै बुढ्यौली देखिने समस्या कम हुन्छ । अर्थात् गाजरले मानिसलाई जवान बनाउँछ । गाजरमा हुने ‘एन्टीअक्सिडेन्ट’ नामक तत्वले कोषको क्षयीकरण रोक्छ र बुढ्यौलीका लक्षण कम गर्छ ।
सुन्दरताका लागि– अनुहारको सुन्दरताका लागि गाजरको लेप बनाएर मज्जाले लगाउने, केहीबेर राख्ने र पखाल्ने गर्न सकिन्छ । यसो गरेमा अनुहारको छाला चमकदार बन्छ र विभिन्न खाले धब्बा पनि हट्छन् ।
Previous “केपी ओलीमा नैतिकता छ भने पदत्याग गरेर प्रायश्चित गर्नुपर्छ : डा भट्टराई।
Next “पार्टीभित्रै सरकारको आलोचना गर्ने समूह छ। प्रतिपक्षी भनेका हाम्रो पाटिकानै भए:-मन्त्री गुरुङ ।